पोखरामा १९ वर्षिय बालिकालाई बलात्कार। सेक्स नगरे पुलबाट फाल्दिन्छु भन्थ्यो (दर्दनाक बयान) - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical online media
पोखरामा १९ वर्षिय बालिकालाई बलात्कार। सेक्स नगरे पुलबाट फाल्दिन्छु भन्थ्यो (दर्दनाक बयान)
प्रकाशित: २६ पुष २०७५, बिहीबार
पोखराको वडा नं १५ कि एक किशोरीले आँफूमाथि विभिन्न बहानामा धम्क्याउँदै बारम्बार बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा एक यूवक विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी छिन ।
पोखरा १५ कि १९ वर्षीय रविना (परिवर्तित नाम)ले आँफूलाई पोखरा १५ स्यानीपाटन बस्दै आएका नसिब गुरुङले असैह्य र निर्मम व्यवहारका साथ बारम्बार बलात्कार गरेको आरोप सहित जाहेरी दिएकी हुन् । विभिन्न प्रलोभन देखाएर खिचिएका आफ्ना नग्न तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा राखेर बेईज्जत गरिदिन्छु भन्दै धम्क्याएको पीडित किशोरीले बताएकी छिन् ।
कटानी जाहेरीपछि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वस्थ्य परिक्षण गर्न पुगेकी रविनाले रुँदै भनिन “असत्ती रहेछ, मेरो फेसबुक एकाउण्टको पासवर्डपनि जवर्जस्ती लग्यो, उसैले चलायो । कलेजमा पनि पुगेर उसले टर्चर दिन्थ्यो, राती राती घरमा बोलाउँथ्यो, उसले चाहेको बेला उसंग त्यो (यौन सम्पर्कं) गर्न तयार हुहनुपथ्र्यो” । “तयार नभए बा, आमा र दाईलाई समेत मार्दिन्छु भन्थ्यो ।” उनले भनिन ।
निकै दर्दनाक अवस्थाबाट गुज्रीएकी उनलाई एकदिन नसिवले पोखराको पृथ्वीचोकस्थित चाईना पुलबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्न समेत लगाएको बताएकी छन् । उनका शरिरभरी नशिवले यातना दिएका घाउ र निलडामहरु समेत रहेको आफन्तजनले बताए ।
चक्र बम र दिपासा विसीको फिचरिङमा “सोल्टिनी” (भिडियो सहित)
विकृती विरुद्धको गीत ‘ए सरकार’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
अञ्जु पन्तको आवजमा ‘हजार गल्ती’ (भिडियोसहित)
टाइम्स स्क्वायरको उद्घाटनमा दुई दिनसम्म लाइभ कन्सर्ट
बिक्रम र आकांक्षाको ‘महशुष’ सार्वजनिक ! हेर्नुहोस् भिडियो
प्रेम सापकोटा पुर्णकला विसीको आवाजमा ‘आशुको धनी’ ( भिडियो सहित )
‘मिष्टर नेपाल ओसिनिया२०१८’ का विजेता खड्काको ताज किन खोसियो